फ्रन्टलाइनमा खटिने नर्सकाे पीडा : के काेराेना लागेका बिरामीको हेरचाह गर्नु पाप हाे ? « News24 : Premium News Channel
म नारायणी सामुदायिक हस्पिटल (NPI) काे आईसीयू विभागमा कार्यरत नर्स हुँ । हिजोआज चितवनमा धेरै संक्रमित देखिएको सबैलाई अवगत नै छ । साथै नारायणी सामुदायिक हस्पिटलमा पनि दुई जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको अवगत नै हाेला ।
हो म तेहि आईसीयूमा कार्यरत नर्स हुँ जहाँको बिरामीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। काेभिड-१९ को महामारीमा काेराेना पाेजेटिभ बिरामीको उपचार गर्न पाउनु हाम्रा लागि गर्वको कुरा हो । र, मलाई गर्व छ- म नर्स हुनुमा । र गर्व छ- काेराेना पाेजेटिभ बिरामीकाे सेवा गर्न पाउँदा । जसलाई मैले चार दिन सेवा गर्ने माैका पाएँ र हाल म पनि कवारेन्टाइनमा बसिरहेकी छु ।
मेरो प्रश्न- हाम्रो देश, समाजमा रहेका ‘न्याराे माइन्डेड’ (संकुचित साेच भएका) मानिस का लागिः
के क्वारेन्टाइनमा बस्नु मेरो रहर थियो ? के नर्स हुनु नै ठूलो पाप हाे ? के फ्रन्टलाइनमा बसेर दिनरात नभनी आफ्नाे ज्यान, बच्चा, घरपरिवारकाे वास्ता नगरी बिरामीको सेवामा लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई गरिने व्ययवहार यही हो ?
बाँच्न सबैलाई पर्ने तर बँचाउने कर्मचारीलाई समस्या पर्दा झन सहानुभुति दिनु त परकाे कुरा, उल्टै कुरा काटेर हिड्ने हाम्राे सामाज छ । छिः घिन लाग्छ त्यस्ता मानिसप्रति । किन गर्नु हुन्छ यस्तो व्यवहार ? छिःछि, दुरदुर र अपमान ? के काेराेना लागेकाे बिरामीको हेरचाह गर्नु पाप हाे ?किन कुरा काट्दै, हल्ला गर्दै ‘फलानाेकाे बुहारीलाई, छाेरीलाई त काेराेना लागेर पुलिसले समातेर लग्याे रे’ भन्नुपर्ने ? याे सब हल्ला फैलाउन र अर्काकाे घरमा चियाेचर्चाे गर्दै हिँड्न जरुरत छ?
तपाईंहरूको यो छुच्छो बोलीले त्यो सानो अबोध बालकको दिमागमा, घरपरिवार, बा-आमामा कसतो असर पर्ला ? एकपटक सोचनुभयो ? मलाई पनि त रहर छ, घरमा आफ्नो बच्चासँग आननदले बस्न, यस्ताे महामारीका वेला । म काम नपाएर तपाईंहरूजस्तो लखर-लखर डुलेर अरर्काको कुरा काट्दै हिँडेर क्वारेन्टाइनमा बसेकी पनि होइन । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो लाईफको प्रवाह नगरी बिरामीको सेवामा खटिँदा बस्नुपर्यो, यसमा म र मेरो परिवारको के दोष ??
त्यसरी नै हामीलाई तुच्छ व्यवहार गरिने हो र हाम्रो मनोबल नबढाउने र हामी बिरामीको सेवामा नलाग्ने हो भने कस्ले गर्छ तपाईहरुका बिरामीको सेवा ?
यतिखेर जुन हिम्मत र सहानुभुतिको हामीलाई जरुरत छ । त्यो सहानुभुति कहाँ पायौँ र खै ? उल्टै गाली र अपहेलना खानुपर्‍यो । के यही हो त एउटा नर्सप्रति गरिने व्यवहार ? जो बिरामीको सेवामा दिनरात नभनी खटिरहेका छौं । के हामीलाई गर्ने व्यबहार यही हो त ? त्यसरी नै हामीलाई तुच्छ व्यवहार गरिने हो र हाम्रो मनोबल नबढाउने र हामी बिरामीको सेवामा नलाग्ने हो भने कस्ले गर्छ तपाईहरुका बिरामीको सेवा ? तपाईहरको यो व्यवहारले जुन चोट म र मेरो परिवारले सहनुपर्याे, माफ गर्ने छैन …सबै देख्नु भाछ भगवानले ।
यस्तै लामो समयको खटाइ, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको अभाव, कोरोना भाइरस संक्रमण को डरले हाम्राे मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको छ । आज हामी डिप्रेसनकाे सिकार भइसकेका छौँ । सक्नुहुन्छ भने हौसला दिनुस, सक्नुहुन्न त कृपया दुर्व्यवहार र टर्चर नदिनुस् ।
मानव भएर मानवजस्तो व्यवहार गर्नुृस् ।
अबदेखि फ्रीकाे सल्लाह कसैलाई दिने छैनौं । केही औषधि अनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव लिनुपरेमा टिकट काटेर मात्र आउनुहोला ।
मैले नबुझेको कुरा, हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु सरुवा रोगको भाँडो कसरी भयौँं र ? हामी जीवन दिन्छौँ हैन र ? तर किन आजकल हामीलाई मृत्युदाता बनाइँदैछ ? के काेराेना संक्रमणकाे कारण हामी स्वास्थ्यकर्मी नै हौँ र ? नत्र किन बुझ्दैन मानिस कि यदि हामी नै नहुने हो भने भोलि उनीहरुको हेरविचार कस्ले गर्छ ? हामीलाई आजको दिनमा झन हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा अपहेलित शब्दले प्र’हार किन गरिन्छ हँ ?
आखिर हामी को त ? मृत्युदाता ?! 😥😥😥😥😓😓
(पछिल्लाे समय काेराेना महामारीका वेला रातदिन जीवनकाे दाउ राखेर उपचारमा खटिने गरेका स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूमाथि समाजले जुन अमानवीय व्यवहार गरिरहेकाे छ र उनीहरूबाट काेराेना सर्छ भनेर अपहेलना गरिरहेछ, यसैकाे पीडा एक नर्सले यहाँ व्यक्त गरेकी छन् । याे अहिले महामारीविरूद्ध फ्रन्टलाइनमा खटिने सबैकाे पीडा हाे । मानवले मानव धर्म बुझ्न नसक्दाकाे परिणाम । ती नर्सले अभिव्यक्त गरेकाे पीडा सम्पादित रूपमा यहाँ राखिएकाे हाे ।)